Bitcoin अपतटीय बैंक खाता स्वीकार क्रिप्टोकरन्सी
Bitcoin अपतटीय बैंक खाता
Bitcoin र अन्य cryptocur मुद्रा आज तातो, ट्रेंडि topics शीर्षकहरू छन्। यद्यपि, यति धेरै जानकारीहरू तैरिरहेका छन् कि यसले बिटकइन प्रयोग गरेर भ्रमपूर्ण बनाउँदछ। वास्तविकतामा, Bitcoin प्रयोग गर्न धेरै सरल छ। एक टेलिभिजन हेर्दा जस्तै, तपाईं टिभी मा कसरी यसको प्रयोग गर्न सक्षम हुन को लागी काम गर्दछ को जटिलता बुझ्नु आवश्यक छैन।
एकचोटि तपाईंसँग बिटकइन भएपछि, तपाईं यसलाई परम्परागत माध्यमबाट पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ। सबै पछि सबै, र विशेष गरी सबै छैन बैंकले Bitcoin स्वीकार गर्दछ। एकै साथ तपाईं गोपनीयता र अज्ञात रहन चाहानुहुन्छ त्यो डिजिटल मुद्रा। यो प्राप्त गर्नका लागि धेरै व्यक्तिहरू क्रिप्टोकुरन्सी वा खोज्छन् Bitcoin अपतटीय बैंक खाता। अर्को शब्दमा, तिनीहरू आफ्नो सेल फोनमा अनुप्रयोगको पछाडि आफ्नो e-मुद्रा भण्डारण गर्न ठाउँ चाहन्छन्; वा एक ठाउँ यसलाई नगद मा रूपान्तरण गर्न र विदेशमा पार्क को लाभ उठाउँदै अपतटीय बैंकिंग.
छोटो उत्तरका लागि तपाईसँग यस पृष्ठमा फोन नम्बर वा सोधपुछ फारम प्रयोग गरेर अनुभवी पेशेवरसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग अफशोर बैंक खाताहरूमा पहुँच छ जुन तपाईंको Bitcoin र अन्य cryptocurrency राख्न सक्दछ। यसैबीच, थप विवरणहरूको लागि थप पढ्नुहोस्।
बिस्कको के हो?
पहिले, Bitcoin के हो? बिटकॉइन एक मुद्रा हो जुन २०० in मा सिर्जना गरिएको थियो। यो विकेन्द्रीकृत डिजिटल मुद्राको एक रूप हो। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई विश्वको कुनै पनि भागमा जो कोहीलाई तत्काल भुक्तान गर्न सक्षम गर्दछ। Bitcoin केन्द्रीकृत नियमन बिना संचालन। यसको सट्टामा, Bitcoin ले पियर-टु-पियर टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ। बिटकॉइन नेटवर्कले सामूहिक रूपमा लेनदेनको व्यवस्थापन र पैसा जारी गर्ने कार्य गर्दछ। सतोशी नाकामोटो मूलतः बिटकोइन विकसित गरे। हामी विश्वास गर्छौं कि नाम एक उपनाम हो जुन सुरुकर्ताले प्रयोग गर्‍यो। जनता बिटकइन विकसित गर्ने व्यक्तिको वा व्यक्तिको वास्तविक नाम थाहा छैन। बिटकॉइन सुरुमा एमआईटी इजाजतपत्र अन्तर्गत जारी गरिएको थियो।
बिटकॉइन वस्तुहरू र सेवाहरू खरीद गर्न र बिक्री गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ परम्परागत मुद्राको रूपमा। प्रयोगकर्ताहरूले पिज्जा, अमेजन उपहार कार्डहरू, र अन्य सामान्य चीजहरू खरीद गर्न सक्छन् जस्तै नगद र क्रेडिट कार्डहरू। बिटकइनले कसरी काम गर्छ भन्ने बारे सोच्दा, डेबिट कार्ड प्रयोग गर्न बिटकइनलाई तुलना गर्न सजिलो हुन्छ। जब एक बैंक खाता होल्डर आफ्नो अनलाइन बैंकिंग प्रणाली को उपयोग गरीरहेको छ, तिनीहरू डिजिटल मुद्रा को उपयोग गर्दै। यी बैंक खातावालाहरूले वायर ट्रान्सफरहरू पठाउन र प्राप्त गर्न अनलाइन प्रणाली प्रयोग गर्न सक्दछन्। यी तार स्थानान्तरणले मौद्रिक मान प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन कागज मुद्रामा फिर्ता लिन सकिन्छ। बिटकॉइनबाट पनि सम्भव छ। बिटकॉइन अमेरिकी डलर, यूरो, वा कुनै पनि अन्य मुद्राको लागि साटासाट गर्न सकिन्छ। यो सामान वा सेवाहरूको लागि सिधा कारोबार गर्न सकिन्छ।
बैंकहरूसँग विपरित, तथापि, Bitcoin प्रयोग गरेर बनाइएको लेनदेन बिना बिचौलियाको साथ गरिन्छ। थप रूपमा, त्यहाँ Bitcoin सँग सम्बन्धित कुनै लेनदेन शुल्कहरू छैनन्। Bitcoin को पनि कुनै खुलासा आवश्यकता छैन। अधिक र अधिक व्यापारीहरूले बिटकॉइन र क्रिप्टोकुरेन्सीका अन्य फारामहरू स्वीकार गर्न थालेका छन्। Bitcoin मात्र अनलाइन डिजिटल मुद्रा होईन। त्यहाँ Ethereum, Litecoin, र अन्य छन्। बिटकॉइन सबैभन्दा प्रख्यात र व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
बिटकोइन कसरी काम गर्दछ?
बिटकॉइन प्रयोग गर्न यो सजिलो छ। पहिलो चरण भनेको स्मार्टफोन प्रयोग गर्नु र एप डाउनलोड गर्नु हो जुन प्रयोगकर्ताहरूलाई बिटकइनमा किन्न वा भुक्तान गर्न अनुमति दिँदछ। यी अनुप्रयोगहरू सामान्यतया बिटकॉइन वालेटको रूपमा चिनिन्छन्। सबै भन्दा लोकप्रिय अनुप्रयोग Coinbase भनिन्छ। प्रयोगकर्ताहरूले बैंकमा खाता वा डेबिट कार्ड अनुप्रयोगमा लिंक गर्न अनुप्रयोगमा भएका निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्दछ। टाइप गर्नेहरू बैंकको अनलाइन प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्डले बैंक खाता नम्बरलाई लिंक गर्दछ। एकदेखि तीन दिनको अवधिमा बनाइएको सानो निक्षेप प्रमाणिकरणले पनि यसलाई लिंक गर्न सक्दछ।
बिटक्वाइन ब्यालेन्सहरू भण्डारण गरिन्छ जुन ब्लकचेन भनेर चिनिन्छ। Blockchain एक साझा सार्वजनिक खाता है। सम्पूर्ण Bitcoin नेटवर्क blockchain मा निर्भर गर्दछ। सबै पुष्टि लेनदेन खातामा समावेश छन्। यस तरीकाले, विकिपीन वालेटहरूले तिनीहरूको व्यय ब्यालेन्स गणना गर्न सक्दछ। नयाँ लेनदेन प्रमाणित गर्न सकिन्छ कि Bitcoins खर्च भइरहेको वास्तवमा खर्च गर्नेको स्वामित्वमा छ। ब्लकचेनको अखण्डता र कालक्रम क्रम सुरक्षित छ। बिटकॉइन प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयता कायम राख्न क्रिप्टोग्राफीद्वारा उनीहरूलाई लागू गरिन्छ।
Bitcoin लेनदेन Bitcoin वालेटको बिच मानको स्थानान्तरण हो। यी लेनदेन blockchain मा रेकर्ड छन्। बिटकॉइन वालेटहरूले डाटाको गोप्य अंश राख्छ निजी कुञ्जी वा बीज। यो डाटा लेनदेन साइन गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो हस्ताक्षरले गणितिय प्रमाणको रूपमा काम गर्दछ कि उनीहरू उपयुक्त बिटक्वाइन वालेटको मालिकबाट आएका हुन्। को हस्ताक्षर एक पटक यो जारी गरिए पछि कसैलाई पनि परिवर्तनको लेनदेन रोक्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। Bitcoin लेनदेन पछि पुष्टि अवधि धेरै छोटो छ। सबै लेनदेन प्रयोगकर्ताहरू बीच प्रसारण हुन्छन्। तिनीहरू सामान्यतया नेटवर्क प्राय: १० मिनेट भित्रमा पुष्टि गर्दछन्।
Bitcoin खरीद अविश्वसनीय सजिलो छ। Bitcoin खरीद गर्नका लागि, प्रयोगकर्ताहरू केवल अनुप्रयोगमा खरीद बटन क्लिक गर्नुहोस् जुन उनीहरू बिटकॉइन वालेटको रूपमा प्रयोग गर्दैछन्। प्रयोगकर्ताको बैंक खाता पहिले नै अनुप्रयोगसँग जोडिएको छ त्यसैले भुक्तान जानकारी पुनः प्रविष्ट गर्न आवश्यक छैन। प्रयोगकर्ताले त्यसपछि उनीहरू खरीद गर्न चाहान्छन् रकम प्रविष्ट गर्दछ। अन्तमा, प्रयोगकर्ताले खरीद किल्छ र लेनदेन पूरा भयो। यो त्यति सजिलो छ।
हामी डिजिटल मार्केटप्लेस कल गर्दछौं, जस्तै स्मार्टफोन अनुप्रयोग जहाँ व्यक्तिहरू बिटकॉइनको लागि पारंपरिक नगद व्यापार गर्न सक्दछन् र बिचकोइनको बिरूद्धमा नयाँ पैसा कमाउन सक्दछन्। विनिमय। यस्तो मञ्चले एक साधन प्रदान गर्दछ जसद्वारा मानिसहरूले डलर, यूरो, येन, इत्यादिका लागि डिजिटल मुद्राको व्यापार गर्न सक्दछन्।
भुक्तान गर्न वा भुक्तान गर्न कोइनबेस अनुप्रयोग प्रयोग गर्नुहोस्
Bitcoin भुक्तानी गर्न छिटो र सजीलो बनाउन को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ Bitcoin वालेट, जस्तै Coinbase को उपयोग गरेर। Coinbase अनुप्रयोगमा, त्यहाँ एक QR कोड आइकन छ जुन Bitcoin मार्फत भुक्तान गर्न एक इलेक्ट्रोनिक कोड उत्पन्न गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। उद्देश्य प्राप्तकर्ताले आइकनलाई छुन्छ र QR कोड प्रदर्शित हुन्छ। प्रयोगकर्ताले त्यसपछि QR कोड, वर्णहरूको सम्बन्धित स्ट्रिंग वा सम्बन्धित ईमेल ठेगाना साझेदारी गर्न सक्दछ पाठको माध्यमबाट भुक्तानी गर्नेसँग।
Coinbase प्रयोग गरी Bitcoin मार्फत कसरी भुक्तानी गर्ने
भुक्तान गर्न सजिलो छ। यी लिखित रूपमा निर्देशनहरू छन्। यदि यो लेखन पछि अनुप्रयोग परिवर्तन भएको छ भने, केहि निर्देशनहरू फरक हुन सक्दछन्।
Coinbase अनुप्रयोगको तलतिर "खाताहरू" प्रतिमा चयन गर्नुहोस्
Bitcoin (BTC) वालेट चयन गर्नुहोस्।
अनुप्रयोगको माथिल्लो दाहिने कुनामा QR कोड प्रतिमा चयन गर्नुहोस्।
"ठेगाना देखाउनुहोस्" चयन गर्नुहोस्
पाठमा "साझेदारी गर्नुहोस्" क्लिक गर्नुहोस् वा तपाइँको बिटकॉइन ठेगाना ईमेल गर्नुहोस् वा "ठेगाना प्रतिलिपि गर्नुहोस्" क्रममा त्यसपछि तपाइँको बिटकॉइन ठेगाना केवल पाठ वा ईमेलमा टाँस्नुहोस्।
एकचोटि तपाइँले तपाइँको भुक्तानी गर्ने व्यक्तिको साथ तपाइँको बिटकइन ठेगाना साझेदारी गर्नुभयो, उहाँ वा उसले तल "कसैलाई कसरी भुक्तानी गर्ने ..." निर्देशनहरू तल पछ्याउन सक्नुहुन्छ।
Coinbase प्रयोग गरी कसैलाई Bitcoin को साथ कसरी भुक्तानी गर्ने
अरू कसैलाई बिटकॉइन भुक्तानी गर्नको लागि, प्रयोगकर्ताले अनुरोध गर्न सक्दछ कि भुक्तानी गर्ने व्यक्तिले टेक्स्ट पठाउनुहोस् वा ईमेल पठाउनुहोस्।
एक भुक्तानी गर्ने एक पछि अनुप्रयोगको तल्लो तिर खाता आइकन क्लिक गर्नेछ।
एउटा Bitcoin वालेट (वा अन्य सम्बन्धित मुद्रा) चयन गर्नुहोस्।
त्यसो भए Coinbase अनुप्रयोगको माथिल्लो दायाँ कुनामा आईकन छुनुहोस्।
अर्को पृष्ठमा, रकम प्रविष्ट गर्नुहोस्।
तलको पृष्ठमा, Coinbase अनुप्रयोगमा खाता नम्बर वा सम्बन्धित ईमेल ठेगानाको प्रतिलिपि गरेर टाँस्नुहोस्। उपयुक्त भुक्तानी नोटहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्।
अर्को क्लिक गर्नुहोस्। त्यसो भए भुक्तानी निश्चित गर्नुहोस्।
यसले पारंपरिक मुद्रा प्रयोग गरेर तार स्थानान्तरण गर्ने जत्तिकै कार्य गर्दछ।
बिटकॉइन यति लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ किनकि यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई परम्परागत मुद्रामा असंख्य फाइदाहरू प्रदान गर्दछ। एकको लागि, तपाईं बिटकॉइन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ निजी खरीद गर्न। अर्कोको लागि, Bitcoin लाई प्रयोगको लागि कुनै आईडी आवश्यक पर्दैन। यसले व्यक्तिहरूका लागि आदर्श मुद्रा बनाउँदछ जो अपेक्षाकृत अज्ञात रहन चाहँदैन। यो गोपनीयता-सचेत वा अविकसित वित्तीय पूर्वाधारको क्षेत्रमा बस्ने ती मानिसहरूका लागि पनि उपयुक्त छ।
Bitcoin सफ्टवेयर अत्यधिक ईन्क्रिप्टेड छ। नतिजाको रूपमा, Bitcoin ह्याक भइरहेका घटनाहरू विरलै दुर्लभ छन्। लगभग सबै अवस्थित ह्याकि ofका घटनाहरू भएका छन् जब बिटकइनको स्वामित्वमा भएको व्यक्तिले उनीहरूको डिजिटल खातामा पासवर्डको साथ लापरवाह गरे। जबसम्म पासवर्ड सुरक्षित हुन्छ, बिटकॉइनले परम्परागत मुद्रा भन्दा महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
चोरलाई घरमै भण्डार गरिएको नगद चोरी गर्न यो सजिलो हुनेछ उनीहरूको लागि पासवर्डको बिना बिटकइन चोरी गर्न। Bitcoin को खरीददार र विक्रेताहरु रेकर्ड गर्ने लग कहिले देखा पर्दैन। केवल Bitcoin प्रयोगकर्ताहरूको वालेट आईडीहरू देखा पर्दछ। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कडा गोपनीयता कायम राख्नका साथै खरीदहरू र सजिलै बिक्री गर्न पनि अनुमति दिन्छ। Bitcoin को उपयोग पूर्ण रूपमा कानूनी छ। यो कानूनी लेनदेनको सबै तरीकामा उस्तै तरीकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन नगद र क्रेडिट कार्डहरू प्रयोग गरिन्छ।
Bitcoin सीमाविहीन छ र प्रयोगको लागि अनुमति छैन। यस लेखन को रूप मा, यो दुनिया मा कुनै पनि देश द्वारा विनियमित छैन। त्यो परिवर्तन हुन सक्छ। मुद्रा सेन्सरशिप प्रतिरोधी छ किनकि कुनै पनि व्यक्तिको कुनै पनि रकमको लेनदेन रोक्न वा स्थिर गर्न सक्षम छैन। बिटकोइनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गर्न पनि सजिलो छ किनकि मुद्रा कुनै खास क्षेत्राधिकारमा बाँधिएको छैन।
यसको परिणाम स्वरूप मुद्रा रूपान्तरण शुल्कहरू पनि हटाइन्छ। Bitcoin प्रयोग गर्नाले अन्य शुल्कहरू पनि हटाउँदछ जुन क्रेडिट लेनदेन शुल्कको रूपमा लेनदेनको साथ सामान्य हुन्छ। केही व्यक्ति लगानीको रूपमा Bitcoin खरीद गर्छन्। तिनीहरू यो आशामा गर्छन् कि बिटकॉइन वर्षौंको मूल्यमा बढ्नेछ। मुद्राको पछिल्लो ईतिहासले देखाउँदछ कि निरन्तर मूल्याation्कन सम्भव छ, तर बिटकॉइन एक लगानीको रूपमा प्रभावकारी हुन सक्छ वा हुन सक्दैन। यद्यपि हामीले विगतमा आश्चर्यजनक बृद्धि देख्यौं तर भविष्यमा यस्तो हुने ग्यारेन्टी छैन।
मुद्रा अटकल धेरै अप्रत्याशित हुन सक्छ। यस तरीकाले, Bitcoin को मूल्य निर्धारणमा परम्परागत मुद्रामा अनुमान लगाउनु भन्दा फरक छैन। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, Bitcoin भनेको सामानहरू खरीद गर्ने माध्यम हो। यो माथि जानको तरीका यो हो कि यदि कोही आउँछ जो तपाईं भन्दा बढी तिर्न इच्छुक छ।
Bitcoin को प्राथमिक लाभ भनेको यसको लगानीको रूपमा मूल्य होईन, तर गोपनीयताले प्रदान गर्दछ। किनकि Bitcoin प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो नाम दर्ता गर्नुपर्दैन, लेनदेन अपेक्षाकृत अज्ञात रहन्छ। Bitcoins प्रिन्ट वा डिबेस गर्न सकिदैन। केवल २१ लाख Bitcoins कहिल्यै अस्तित्वमा हुनेछ। तिनीहरूको कुनै भण्डारण लागत छैन र कुनै भौतिक ठाउँ लिने छैन। नतिजाको रूपमा, Bitcoin राम्रोसँग नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको रूपमा प्रमाणित हुन सक्छ।
सम्पत्ति सुरक्षाका लागि बिटकोइनले अपतटीय कानुनी सवारीहरूको आवश्यकतालाई कम गर्दैन। वास्तवमा, यसको विपरित सत्य हो। अफशोर व्यवसाय संस्थाहरूको प्रयोगले वास्तवमा बिटकिन प्रयोग गरेर गोपनीयता र सुरक्षा बढाउन सक्छ।
एक अफशोर कम्पनीमा बिटकइनसँग सम्बन्धित डिजिटल खाता दर्ता गरेर बिटकइनको प्रयोगको माध्यमबाट किफायती गोपनीयता बढाउन सम्भव छ। यसले Bitcoin र तिनीहरूको मालिक बीच बिभाजनको अतिरिक्त तह सिर्जना गर्दछ। नतिजाको रूपमा, सम्पत्ति सुरक्षाका लागि यो प्राविधिक धेरै मूल्यवान छ। Bitcoin का लागि उत्तम सुरक्षा एक अपतटीय कम्पनी को उपयोग मार्फत पाउन सकिन्छ।
अफशोर कम्पनीहरूले बिटकइनका लागि उत्तम सुरक्षा प्रदान गर्दछ किनकि नेभिस, बेलिज र कुक टापु जस्ता देशहरूमा तिनीहरू घरेलु निर्णयहरूको अधीनमा छैनन्। नतिजा स्वरूप, यदि अमेरिकामा कुनै व्यक्तिको बिरूद्ध कुनै फैसला भयो भने, उक्त व्यक्तिको लेनदारहरुलाई अफशोर कम्पनीमा दर्ता गरिएको खातामा राखिएको बिटकॉइन जफत गर्ने आदेश दिन गाह्रो हुन्छ। के तपाइँ बिटकॉइनको बारेमा थप जानकारी चाहानुहुन्छ? अपतटीय बैंक खाता? तपाई यस पृष्ठमा नम्बर वा सोधपुछ फारमको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ एक प्रशिक्षित पेशेवरसँग कुराकानी गर्नका लागि।
अन्तिम अपडेट अगस्त ११, २०२० मा भयो